अस्पतालमा भर्ना थिइन् पहिली पत्नी, संजय दत्त छोरीकालागि सासू ससुरासँग झगडा गरिरहेका थिए::JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
अस्पतालमा भर्ना थिइन् पहिली पत्नी, संजय दत्त छोरीकालागि सासू ससुरासँग झगडा गरिरहेका थिए
३ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:२१
मुम्बई। सजय दत्तको नयाँ फिल्म ‘कलंक’ १७ अप्रिलमा रिलीज हुँदैछ। यहीबीचमा उनको पुरानो एउटा अन्तर्वाता भाइरल भइरहेको छ, जसमा जसमा उनले आफ्नी पहिली पत्नी ऋचा शर्मासँग छुट्टिएका विषयमा कुरा गरेका छन्। १९९३ मा दिएको उक्त अन्तर्वातामा संजयले ऋचासँग छुट्टिनुमा ऋचालाई नौ दोषी ठहर गरेका छन्।
उनले त्यो समयमा आफू ऋचासँग निकै रिसाएको पनि खुलासा गरेका छन्। त्यो बेला उनकी छोरी त्रिशालाले उनलाई बाबा नभइ अंकल भनेर बोलाएकी थिइन्।
संजयले उक्त अन्तर्वातामा भनेका थिए, ‘मलाइ ऋचाप्रति धेरै रिस उठेको थियो र मैले उनले छोरीले किन अंकल भनिन् भनेर पनि सोधेँ। म मेरा बच्चा नजिकै थिइन् भने पनि ऋचाले उनीहरुको दिमागलाई ताजै राख्ने काम गर्नुपथ्र्यो।’
संजयले अगाडि भने, ‘मलाइ सम्झना छ उनी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। त्यतिबेला ऋचाका परिवारले मसँग त्रिशालालाई के गर्छौ भनेर सोधे। मैले उहाँहरुलाई तपाइँहरु किन यसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, ऋचा जिवितै छन्, उनी मरेकी छैनन्।’
संजयलाई त्रिशलाको कस्टडीकालागि कत्तिको लडाइँ गर्नु भयो? जवाफमा उनले भने, ‘ कति झगडा गर्नु? मैले कोशिश गरेको थिएँ। तत्काल म आफ्नी छोरीलाई कस्टडी चाहन्न थिएँ। तर जे भएपनि म छोरीसँग चाहेको बेलामा भेट्ने स्वतन्त्रता चाहन्थेँ।’ संजय दत्ताले १९८७ मा ऋचा शर्मासँग विवाह गरेका थिए। १९८८ मा छोरी त्रिशलाको जन्म भयो। त्यसको आठ वर्षपछि ब्रेन ट्यूमरका कारण ऋचाको निधन भएको थियो।
माधुरी दीक्षितसँगको अफेयरका कारण संजय र ऋचाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। ऋचाकी बहिनी एनाले एक अन्तर्वातामा माधुरीको प्यारमा पागल संजय दत्त क्यान्सरसँग लडिरहेकी पत्नीलाई विमानस्थलमा लिनसम्म जाँदैन थिए। ऋचाको निधनपछि संजयले रिया पिल्लईसँग १९९८ मा विवाह गरे। तर यो विवाह धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन। र, २००५ मा दुवैबीच सम्बन्ध विच्छेद भयो।
रियासँग अलग भएपछि संजयले मान्यतासँग तेस्रो विवाह (२००८) मा गरे। जसबाट जुम्ल्याहा बच्चा शाहरान र इकाराको जन्म भयो। उनकी जोठी छोरी ३१ वर्षकी भइसकेकी छन्। र दुवैबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ।